नेपालमा सेक्स टोयको बढी प्रयोग कसले गर्छन् ? पुरुषले कि महिलाले – jagritikhabar.com
नेपालमा सेक्स टोयको बढी प्रयोग कसले गर्छन् ? पुरुषले कि महिलाले
काठमाडौंमा दैनिक औसत ८-९ वटाको दरले सेक्स टोयको व्यापार हुने गरेको पाइएको छ । नेपालमा पनि टोयको माग बढ्दै गएको छ । देशभर नौवटा भन्दा बढी टोयका पसल छन् । स्वचालित पेनिसदेखि स्तन, भेजिना मसाजरको सामग्रीलगायतका यौन सामग्री नेपालमा उपलब्ध छ । काठमाडौंमा पछिल्लो समय फुल बडी टोय उपलब्ध नभए पनि पोखरामा भने उपलब्ध छ ।
काठमाडौंमा ११ सयदेखि १२–१३ हजार मूल्यसम्मका खेलौना उपलब्ध छन् । नेपालमा कन्डम हाउसले होलसेलमा टोय बिक्री गर्दै आएको छ । हाउसबाटै काठमाडौंबाहिर पनि टोय जाने गरेको छ । नेपालमा चीन, थाइल्यान्ड, जापान, मलेसिया र कोरियाबाट टोय ल्याउने गरिन्छ ।
व्यवसायी भने टोयको उत्साहप्रद व्यापारचाहिँ नभएको बताउँछन् । तीनदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्मको टोय अत्यधिक बिक्री हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् । नवकान्तिपुरबाट